Pfupikisa Mhedzisiro yeCoff Nzira yekuisa Beer neKofi-Nhau-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Sevadi vekofi, ini ndinoda maitiro ekubika kofi yekapu uye senge nekubika doro. Ndakapedza nguva yakawanda ndichitarisa maitiro evabiki ekuti vangabike sei nekofi. Saka kune avo vanofarira, ini ndinotanga nzira yangu.
Thermail mafuta ekudziisa imba yekubikira 1BBL
Electic simba rekuvira unitank
Ini zvirokwazvo ndakakanganisa zvakanyanya mukuitika, pano ndiri kufara kugovana nemi mose.
Mubvunzo: Ndakawedzera kofi panguva yekubika.
Mhinduro: Instant kofi haina kuravira zvakanaka sezvo kofi isiri kuzoita mashiripiti kuvandudza kana yawedzerwa kune doro.
Mubvunzo: Ndoupi musiyano uripo pakati pebhinzi rakaoma nekafa yakaomeswa?
Mhinduro: Kofi yakadzikwa ine mukombe wekafi wakawanda asi iyo kofi inonaka inopenya. Bhinzi yakaoma yainge yakapesana, munhuwi wacho waive wakasimba nechibhakera chemichero, asi pane kafuta kofi kashoma.
Previous: Doro Brewing neCofi Flavour
Zvadaro: Corporate Culture Benefits Employees and Customers